डोनल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिँदै आएको रकम किन रोके ? « Postpati – News For All
डोनल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिँदै आएको रकम किन रोके ?
बैशाख ३, काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिँदै आएको रकम बन्द गर्न आफूले प्रशासनलाई निर्देशन दिएकबो जानकारी दिए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाभाइरस संक्रमण रोक्नका लागि आधारभूत काम गर्न पनि असफल भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘जब चीनबाट कोरोनाभाइरसको संक्रमणको सुरुवात भयो तब संयुक्त राष्ट्रको यो संगठनले यसलाई सम्हाल्न असफल रह्यो र वास्तविक तस्बिर लुकाइरह्यो ।’ यसअघि ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई ‘चीन परस्त’ भएको आरोपसमेत लगाएका थिए ।
संसारभरी कोरोनाभाइरसको महामारी फैलिरहेका बेला ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग रोकेका छन् । यसअघि ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रलाई दिइने रकममाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्झौताबाट पनि अमेरिकालाई अलग्गयाएका थिए । ट्रम्पको निशानामा वर्ल्ड ट्रेड ओर्गनाइजेशनमा पनि छ ।